एउटा साधारण एन्डोस्कोपिक उपचार जसले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ • Health News Nepal
भर्खर ३२ बर्षकी उनी दुई बच्चाहरूको आमा हुन् । सोलुखुम्बुको दुर्गम गाउँमा बस्ने उनी दुई महिनादेखि लगातार उल्टी हुने, भोक नलाग्ने, अनि २० किलोग्राम वोजन कम भएपछि काठमाडौँ आएकी थिईन। जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा जरुरि चेक-जाँच गरेपछि चिकित्सकले उनलाई पेटको क्यान्सर भएको पत्ता लगाए । तर , बिडम्बना उनको क्यान्सर शरीरभरि फैल्सकेको थियो, जसलाई मेडिकल भाषामा आन्तिम स्टेज (स्टेज – IV) पनि भनिन्छ ।
तेतिमात्र नभएर उनको क्यान्सरले पेटबाट आन्द्रामा खाना जाने बाटो पनि बन्द गरिदिएको थियो जसले गर्दा उनले खाएको सबै कुरा उल्टी हुन्थ्यो। केमोथेरापी मात्र अन्तिम विकल्प हुन्छ यो स्थितिमा, तर उनको कम्जोर शरीरले तेस्को साइड इफेक्ट झेल्न निकै गार्हो हुन्छ ।
तेसैले डा. शेखर पौडेल र उनको टीमले उनलाई सेम्स (SEMS) राख्ने सल्लाह दिए, जसले उनलाई सबै प्रकारको खाना खान सहज हॊस। सेम्स (SEMS) राख्ने प्रक्रिया सफल भएपछी उनी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल रेफेर भईन ।
के हो SEMS (Self Expanding Metal Stent)?
यो एक प्रकारको धातुबाट बन्ने स्टेंट हो जुन साधारण एन्डोस्कोपी मेशीनबाट सजिलै हाल्न सकिन्छ । आन्द्रा या खानको नालीमा ट्यूमर या आन्य कुनै कारणले रोकावट भएमा यस्लाई उक्त रोकावटको वारपार हुने गरि एन्डोस्कोपको माध्यमबाट रखिन्छ । यसमा एकप्रकारको मेमोरी हुन्छ जसकारण यो बिस्तारै फुल्दै जान्छ र रोकिएको बाटो खोल्ने काम गर्छ । केहि महँगो भएपनि यो प्रक्रिया निकै सहज, छिट्टो र सुरक्षित हुन्छ । यसमा बिरामीलाई नत बेहोस बनाउनु पर्छ नत भर्नानै गर्नु पर्छ या कुनै चिरफारको नै जरुरत पर्छ ।
नेपालमा यसको अभ्यास अलि कमनै भएपनि भारत र अन्य देशमा यसको प्रयोग धेरैनै हुन्छ । जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा हालै मेडिकल र सर्जिकल दुवै छेत्रमा विज्ञ चिकित्सकहरुले काम सुरु गरेपछि यो लगयत अन्य सबैप्रकार सेवाहरु अरु अस्पतालको तुलनामा सस्तो र सहज तरिकाले उपलब्ध हुन थालेका छन् ।
विशेषगरी अप्रेशन गर्न नमिल्ने क्यान्सरका बिरामीहरुमा यसको प्रयोग धेरै हुन्छ । खानाको नाली र पेटको क्यान्सर भएका बिरामीहरु, जसमा खानाको बाटो बन्द हुनसक्छ, तिनीहरुमा यसको प्रयोगले सबै प्रकारका खाना खान धेरै सहज हुन्छ। सामान्य रुपमा जटिल शल्यक्रिया गरेर या नाकबाट नाली हालेर गरिने उपचारलाई यो उपचार पद्दतिले गर्दा क्यान्सरका बिरामीलाई भविष्यमा धेरै फाइदा पुग्न सक्छ।
तस्बिर: क्यान्सरको बिचमा राखिएको स्टेंट क्रमशः एक्सरे र एन्डोस्कोपीमा
Tags: #Nepal Medical CollegeCancerGastro
Pingback: वीर अस्पतालमा सर्जिकल भवन फागुन देखि सुचारु सँगै ८ सय नयाँ दरबन्दी थपिने #Birhospital • Health News Nepal
Pingback: काठमाडौंमा ‌खूल्यो नेपालकै पहिलो काइरोप्राक्टिक सेन्टर #chiroPractic • Health News Nepal
Pingback: जब ब्रेनको ट्युमर निकाल्दा निकाल्दै बिरामीले गाइन यस्तो गीत • Health News Nepal